Extinction Rebellion andiana mpikatroka karama: Martin Vrijland
Eny, tsy mila milaza amin'ny olona izay somary miraikitra amin'ny lalao media sy lalao politika ianao. Ny hetsi-panoherana ny Extinction Rebellion, izay tsy nahazoana fahazoan-dàlana mihitsy, dia resin'ny hafatr'ireo mpiasan'ny fakantsary amin'ny haino aman-jery ary ny fisamborana dia tsy hafa fa seho amin'ny fakan-tsary. Ara-bakiteny vitsy ny olona manana endrika hippie mahazatra (somary maodely loatra), izay mahazo vola kely hananganana tranolay ho sambany amin'ny fiainany ary tsy mahalala ny momba azy.
Ny Broadcaster PowNed, dia mety hahazo fandrika vitsivitsy ihany koa amin'ny alàlan'ny fampisehoana mazava fa ny tanora dia tsy mahalala akory fa ny CO2 dia ny fanafohezana ny fitrandrahana karbona, raha toa izao isika izao porofo matetika eto nahita tamin'ny tranokala fa ny fihetsiketsehana toy izany, anisan'izany ny korontana sy fisamborana, dia eo ambany fitarihana ary voadaroka PowNed mitovy. Saingy tamin'ny fampielezana ny fehikibo lakandrano-amin'ny-tenda (ary noho izany ny sary 'mety' Thierry Baudet sary) dia manosika ireo mpikatroka ho amin'ny anjara toeran'ny niharam-boina sy ny tantara ianao dia naneho fa ny zava-drehetra omenao ny toeran'ny lasibatra dia hahazo ny toeran'ny inviolability.
Tamin'ny alahady 10 aprily 2016 dia nankany amin'ny Hague aho niaraka tamin'ny namako hijery ny fihetsiketsehana Pegida ary hijery raha ny sary izay navoakan'ny fampahalalam-baovao dia mifandraika amin'ny zava-misy. Tsy ela dia tsapanay fa tsy izany no zava-misy. Hitanay tamin'ny masonay manokana fa voadaroky ny fampahalalam-baovao tanteraka ny fihetsiketsehana toy izany ary ny fisehoana sy ny fanoherana, toa ny fisamborana dia napetraka tanteraka.
Nanomboka tsara ny andro, rehefa teo am-pisotro kafe manodidina ny antsasaky ny 1 ny tolakandro ary nanomboka nita sary tao ambadiky ny fefy nifanandrinan'ny kianja Spui aho. Avy hatrany dia nisy polisy roa tonga nanontany anay ny karapanay. Raha ny tena izy dia niharihary fa tena nanao izany tamin'ny mpandalo tsirairay izy ireo. Ny isan'ny polisy nanatrika dia tena betsaka raha oharina amin'ireo vondrona mpanao fihetsiketsehana. Tombanana fa misy 500 mpiasa amin'ny mpanao fihetsiketsehana 50. Mifanohitra amin'ny hafatra amin'ny haino aman-jery mahazatra izany, izay nilaza fa misy izany Mpikatroka 100 ireo. Mety ho toa izany, satria manodidina ny 1 ireo mpanao fihetsiketsehana manodidina an'i 1 dia nandehandeha tamin'ny mpanao gazety, mpaka sary na mpaka sary mpaka sary. Tena sary mampalahelo izany. Ny fihodinana tsy dia nisy dikany loatra. Toy izany koa no nampihatra tamin'ny antsoina hoe mpanohitra Antifa.
Na dia talohan'ny fihetsiketsehana aza dia nisy ny fikasana hanonganana ny fisamborana satria ny fanatrehan'ny ME misy 'ivelan'ny manga' mpikatroka matihanina Frank van der Linde voasambotra. Toa efa nifanekena mialoha izany, satria ny fakantsary rehetra sy mpaka sary rehetra mahalala ny fotoana rehetra ary vonona ny haka sary. Tsy mahefa na inona na inona i Frank miantso ny tenany ho mpikatroka matihanina, satria toy ny hetsika famerenana. Na izany aza, tsy ho matihanina akory fa ny media hafa no nalaina an'ity indray mitoraka ity. Inona no nitranga? I Van der Linde dia tsy tratra intsony tao ambadiky ny fiara, fa niresaka minitra vitsy niaraka tamin'ireo andriambavy izay vao avy naka azy "tena mahery setra" teo anoloan'ireo fakantsary. Busted! (jereo ny sary amin'ny faran'ny lahatsoratra)
Ny fihetsiketsehana mihitsy dia nanana ny singa rehetra amin'ny fampisehoana napetraka. Ny helikoptera polisy no nahavita ilay hetsika. Pown dia niaraka tamin'ny mpaka rameva iray: blondo izay tsy mivavaka afa-tsy karazana wierdo sy tale iray. Ho fanampin'izay, manana ekipa avy amin'ny NOS, Telegraaf, omroep Andrefana ianao ary tsy azonao eritreretina hoe ratsy izany. Inona no tokony hataon'ny firenena media rehetra amin'ny fihetsiketsehana fohy mandritra ny fotoana fohy? Azo vinavinaina ny valiny. Tokony ho toa fahombiazana lehibe ho tratrarin'ny fikambanan'olona mifamono izany. Tsy misy zavatra tsy marina. Ny fiatoana dia tsy misy afa-tsy amn'ny mpikarama sasany, sahala amin'ilay hitantsika ankehitriny ao amin'ny Extinction Rebellion. Tsia, tsy mbola nahita ny karama farany izay manaporofo fa nokaramaina izy ireo, nefa tsy mihoatra ny orinasa manjary maro be izany fa ny ekipa Pegida no nahazo ny sora-baventy mety sy famantarana eo an-tanany tamin'ny fotoana mety. mametraka ny fakan-tsary. Nihodinkodina ny zava-drehetra manodidina ny fakan-tsary misy sy ny tifitra. Ary PowNed mazava ho azy fa nanadihady ireo extras rehetra tsy misy fijery ireo.
Nisy fotoana aho dia naheno ny tafatafa nataon'i PowNed tamina ramatoa iray manana volo mena. Raha nanontaniana taty aoriana dia hita fa monina ao amin'ny faritra izy ary manana ny bilaoginy manokana, ary nianatra zavatra avy amin'ny resaka nifanaovan'ny polisy. Reny fa misy ekipa 25 mpanao fihetsiketsehana ao Burgerking vonona ny hanafika ny Pegida mpanao fihetsiketsehana-extras. Zahao ny video eto ambany. Raha ny fomba, raha maheno ny feon'ny fiaviana ianao dia toa toy ny lahateny mahavariana no omena. Ireo dia tsy mihoatra ny olona 4, anisan'izany i Pegida Holandey Edwin Wagensveld ary olona vitsivitsy izay mamaky tsirairay amin'ny feo iray.
Nanapa-kevitra ny handeha eo alohan'ny fihetsiketsehana aho ary hijery ny Burgerking nolazain'ny ramatoa mena. Ary eny, teo izy ireo: ireo mpanohitra ny mpanao fanoherana ao Antifa. Antsoiko hoe protestant-extras izy ireo, satria fihetsika iray izany. Na dia nandritra ny herisetra aza, maro ireo mpikambana ao amin'ity vondrona ity dia nanisy ny mason'izy ireo, izay ahitanareo fa milalao izy ireo. Miharihary fa ny klioba Antifa manontolo dia napetraka tao amin'izany Burgerking ahafahana mametraka ny fisamborana. Satria nahoana no mitazona vondrona ao amin'ny Burgerking ianao mandra-pahafahan'ny fihetsiketsehana Pegida ary avelao hivoaka avy ao amin'ny Burgerking izy ireo eo anoloan'ireo ekipa rehetra ary hosamborina ao anatin'ny segondra 2? Azo antoka fa efa nanao izany ianao talohan'izay? Vonona hanao ny asany fotsiny izy ireo. Ny fisamborana dia tsy fahita firy akory eo anoloan'ireo fakantsary. Voatory indray!
Tena nahaliana ny nahita ilay fampisehoana fehezin'ny ME nandehandeha tao an-tanàna sy ny tsy nahitana an'izany afa-tsy ny teny filamatra iray ihany no nantsoina tamina "AZC lavitra izany!«Eto dia efa mazava fa io fitsangatsanganana an-tanàna io dia tsy zavatra hafa fa fampisehoana fotsiny; nikasa ny hikarakara ny sainan'olom-bitsy ao amin'ny Burgerking ho an'ireo andiany fakantsary sy mpaka sary misy. Ny fisamborana an'i 54 izay voatatitra tany Antifa ao amin'ny media dia lehibe tokoa. Ankoatra izany, tsy tena fampisehoana izy ireo. Ny varavaran'ny Burgerking dia nosokafan'ny manamboninahitra mitovy amin'ireo hetsika 2 segondra taorian'ny fisamborana. Azonao atao ny milaza ny manodidina ny firy tafahoatra tao amin'ny Burgerking. Tamin'izany fomba izany, tsy nisy mpiasa tonga tao amin'ny Burgerking, noho izany dia nohofaina mazava ny toerana hanaovana an'io fotoana io.
Ny anton'ny fitsidihana ny fihetsiketsehana tao The Hague dia ny hahafantatra amin'ny masonao manokana hoe ahoana ny fisian'izany fihetsiketsehana sy ny fomba fiasa izany. in Nandinika i 2013 fa natao tanteraka ny fihetsiketsehana rehetra. Mety ho mazava izao fa marina io famaranana io.
Raha mieritreritra misehoseho indray ianao, dia fantaro fa ny zava-drehetra dia eo ambany fifehezan'ny fanjakana. Oh eny, ary ny mpanatrika fakan-tsary an'ny polisy (jereo ny fotsifotsy fotsy amin'ny saripika) dia nahitana fakantsary am-polony nanodidina ilay fiara fitaterana ary koa fakan-tsary mihodina mahavariana izay milalao ny zava-drehetra ary mety efa efa voasoratra ny tarehinao raha kely fotsiny ianao ny faritra akaiky. Koa afaka milaza amin'ny toky miaraka amin'ny 100% izahay fa misy ny fihetsiketsehana. Mifehy ny fanjakana ny zava-drehetra. Ka tena mieritreritra ve isika fa tsy misy fikambanana ao ambadik'ireny fihetsiketsehan'ny Extinction Rebellion manerantany iny? Mazava ho azy fa misy ny fandaminana ao ambadik'izany! Io no sehatra hery ankavia izay voalaza fa hamatsy George Soros amin'ny ankavanana (jereo eto), fa amin'ny farany na ny ankavia sy ny ankavanana dia nalamin'ny vondrona elitistika iray ihany ary ny marika dia hitsoka eo amin'ny ankavanana (jereo ity lahatsoratra ity ho fanazavana antsipirihany), ka ny tondrozotra amin'ny fitondram-panjakana manerantany dia azo tanterahina miaraka amin'ny 'fiovan'ny toetr'andro' ho fialan-tsiny lehibe. Truman Show!
Lisitry ny rohy loharano: nu.nl, notalotofpeopleknowthat.wordpress.com
Tsy fahampian'ny maha-lahy na maha-vavy sy mpitarika ara-politika faran'izay lavitra any Eorôpa
Ny savaran'ilay adihevitra momba ny fifidianana amin'ny fifidianana monisipaly ao amin'ny Bar: Thierry Baudet sy ireo mpilalao hafa ao amin'ny barazy
Tags: Amsterdam, fihetsiketsehana, Fikomiana mihintsy, Featured, voamarina, gefinancier, George, hetsi-panoherana, Soros, tanàna, izao tontolo izao
9 Oktobra 2019 ao amin'ny 16: 30
Sly femme Halsema dia nianatra zavatra betsaka tao amin'ny kabinetra teatra. jereo Parool ankehitriny eo ambany rohy
Miaro ny lazaina hoe protestanta ny polisy sy ny ME, izay manakana azy ireo hivily.
Nilalao tsara izany hira izany. Ary miantso an'i Timmermans ny Papa iklim,
dia afaka mangarahara kokoa, sakafo ho an'ny mpampianatra sosialy.
Reko mihitsy aza fa teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana (sandoka) dia ny tanora
iza no mankafy fiofanana any ivelany, tsy ho marina izany?
95% an'ny mpanao fihetsiketsehana (sandoka) dia avy any ivelany.
Oh maninona no ??? valiny: "Avy eo dia tsy ekena ho azy ireo haingana"
« Ny marika 'mety' ary ny paikady famaritana arahin'asa stigma
Syria nanafintohina an'i Syria ho harbinger ho an'i Eoropa »
Total visits: 348.513
Martin Vrijland op Ny tsimok'aretina corona sy fanombohan'ny krizy lalina ary arahan'ny fanararaotana Tiorka an'i Eropa
Still_No_Internet op Ny tsimok'aretina corona sy fanombohan'ny krizy lalina ary arahan'ny fanararaotana Tiorka an'i Eropa
ZalmInBlik op Nopotehin'ny baomba Rosiana ny fitaovam-piadiana tiorka any Syria, nohamafisina ny toe-draharaha